FAQs - Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny fandefasana farafaharatsiny. Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny habetsaky ny kely dia kely, mamporisika anao izahay hijery ny tranokalanay
Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay. Mampiasa fonosana loza manokana koa izahay ho an'ny entana mampidi-doza ary mpandefa fitehirizana mangatsiaka voamarina ho an'ny entana mora tohina. Ny fonosana matihanina sy ny takiana famonosana tsy mahazatra dia mety mitaky fiampangana fanampiny.
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ny Express matetika no fomba haingana indrindra nefa koa lafo indrindra. Amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny tahan'ny fandefasana entana marina dia azonay omena anao raha toa ka fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanja ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Te hiara-hiasa aminay?